Global Voices teny Malagasy » Bilaogera Tshadiana Nofonjaina · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 12 Avrily 2013 3:56 GMT 1	 · Mpanoratra Nwachukwu Egbunike Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Afrika Mainty, Tchad, Lalàna, Mediam-bahoaka, Vaovao, Zon'olombelona
Nitatitra ny Internet Without Borders  (Internet tsy misy sisintany) fa nosamborin'ny miaramila tao N'Djamena, renivohitr'i Tshady tamin'ny 22 marsa i Jean Laokolé, mpanoratra sady bilaogera Tshadiana. Nisy ny fanangonan-tsonia  natao ny andron'ny 9 avrily nilazàn'ilay vondrona nisolovava fa “nosamborin'olona manao fitafiana sivily [i Laokolé] raha iny nitondra fiarakodia niaraka tamin'ny fianakaviany iny.” Miantso ho amin'ny “famitsorana tsy misy hatak'andro sy tsy misy fepetra” ilay bilaogera ny fanangonan-tsonia.
Tao akaikin'ny toby miaramila antsoina hoe “Toby Amsinene” no nahitana farany an'i Laokolé tamin'ny 25 marsa. Nolazain'ny mpikatroky ny zon'olombelona tao an-toerana tamin'ny Internet Without Borders fa malaza amin'ny fitazonana gadra politika io toby io. Nanangona tahirin-kevitra  [PDF] momba ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona mpitranga ao Amsinene ny Amnesty International tamin'ny 2012. Araka ny Amnesty International , dia nipoitra avy ao amin'ny fianakaviana mafana fo ara-politika lasibatry ny mpitondra fanjakana hatry ny taloha i Laokolé. Mpitarika politika mpanohitra sy filoha lefitry ny vondron'antoko politika ao amin'ny fanoherana ny rainy Jean-Baptise Laokolé. Toy izao ny nosoratan'ny Internet Without Borders amin'izay mety ho antony nisamborana an'i Laokolé:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/04/12/47623/